हाम्रो बारे - Kinrom इंडस्ट्रीज
निकास लचिलो पाइप
तेल र पानी पाइप
Kinrom उद्योग city-- Ningbo, चीन तेस्रो सबै भन्दा ठूलो पोर्ट मा पत्ता, 1983 मा स्थापित थिए। For more than thirty years, the company has been dedicating itself to provide metal tube and pipe solution for auto engine and emission system, and other pipe and tube application in Automobile Industries.
हामी काम तीन बिरुवाहरु, र दक्षिण कोरिया मा एक गोदाम, युरोप र भारत दुई सञ्चालन कार्यालय छ। कम्पनी 30 ईन्जिनियरहरु, सँगै काम सहित 500 कर्मचारीहरु संग, 61500 वर्ग मीटर को कुल निर्माण क्षेत्र छ। त्यहाँ पुच्छर पाइप लागि निकास लचिलो पाइप लागि7उत्पादन लाइनहरु,5EGR पाइप लागि,4हाइड्रो गठन भागहरु र 3, सालाना7लाख टुक्रा को क्षमता पुगिरहेका छन्। एक मा-घर प्रयोगशाला केन्द्र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भौतिक, उत्पादन र यसको प्रदर्शन परीक्षण गर्न प्रयोग गरिएको छ।
ठोस व्यवस्थापन, प्रविधि र उत्पादन गुणवत्ता संग, Kinrom 2006 मा पारित टीएस 16949, र आईएसओ 14001 र आईएसओ 18001 कम्पनी अब OEM र वैश्विक ग्राहकहरु लागि ODM सेवा दुवै प्रस्ताव सक्षम छ 2013. मा द्वारा प्रमाणित भएको थियो।
हामी समय मा हाम्रो ग्राहक विश्वभरिका सर्विंग्स प्रदान गर्न अन्तरराष्ट्रिय बिक्री टीम छ। हाम्रो उद्देश्य राम्रो उत्पादन प्रदान गर्न, र राम्रो जीवन बनाउन छ।
ठेगाना: छैन। 528 yuanbaoshan सडक BeiLun Ningbo Zhejiang चीन
फ्याक्स: 0086-574 + 26878072